Motivation for success :: गौतम बुद्ध र गरिबी
गौतम बुद्ध र गरिबी
प्रकाशित मिति : बुधबार, पौस २८ २०७८
काठमाडौँ – एक पटक भगवान गौतम बुद्धले एउटा गाउँमा धार्मिक सभालाई सम्बोधन गरिरहेका थिए । मानिसहरू आफ्ना विभिन्न समस्या लिएर त्यो सभामा आएका थिए ।
सोही गाउँको सडक छेउमा बसेर बुद्धको प्रचार शिविरमा आउने मानिसहरूलाई एक गरिब मानिसले ध्यान दिएर हेरिरहेका थिए । मानिसहरु धेरै दुःखी अनुहार लिएर भित्र पसेको देखेर उनी निकै अचम्ममा परे तर फर्केर आउँदा निकै खुःसी र सुखी देखिन्थे ।
त्यो गरिबलाई लाग्यो कि उसले पनि आफ्नो समस्या भगवानको अगाडि किन नराख्ने ? मनमा यही सोच लिएर उनी बुद्धसम्म पनि पुगे । मानिसहरु लाईनमा बसेर आफ्नो समस्या सुनाइरहेका थिए ।
जब उनको पालो आयो, उनले पहिले बुद्धलाई नमस्कार गरे र त्यसपछि भने, ‘भगवान, यो गाउँमा लगभग सबै सुखी र समृद्ध छन्। त्यसो भए म किन गरिब ?’
त्यसमा उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘तिमी गरिब छौ किनकी तिमीले आजसम्म कसैलाई केही दिएनौ।’ यो सुनेर गरिब एकदमै छक्क पर्यो र भन्यो, ‘भगवान, मैले अरुलाई के दिने ? म एक्लै बाँच्न सकिनँ । जनतासँग भिख मागेर पेट भर्छु ।’
भगवान बुद्ध केही समय शान्त रहे, त्यसपछि भने, ‘तिमी धेरै अज्ञानी छौ। अरूसँग बाँड्नको लागि भगवानले तिमिलाई धेरै दिनुभएको छ। जनतामा आशा जगाउन सकियोस् भनेर मुस्कान दिनुभएको छ । जनतालाई दुई मिठा शब्द बोल्न सकोस्, प्रशंसा गर्न सकियोस् भनेर मुख दिएको हो । मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सकियोस भनेर दुई हात बनाइएको् हो । जसलाई भगवानले यी तीन कुरा दिएका छन्, उ कहिल्यै गरिब हुन सक्दैन। मानिसको मनमा गरिबीको विचार छ, यो भ्रम हो, यसलाई हटाउ।’
मनमा गरिबीको भावना कहिल्यै नउठाउनु, गरिबी स्वतः हट्छ। भगवान बुद्धको सन्देश सुनेर मानिसको अनुहार उज्यालो भयो र उसले यो शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्यो